China Exterior Wpc Panel Cladding 219.28mm orinasa sy mpanamboatra | DEDGE
WPC CLADDING WPC
30% HDPE + fibre hazo 60% + additives 10%
Rafitra mora vidy vita pirinty
Ny mampiavaka ny fitaovana samihafa Fitaovana rindrina ivelany
DEGE WPC rindrina azo ampiasaina amin'ny varotra sy any an-trano fampiasana ivelany, mety amin'ny rindrina fananganana vaovao na nohavaozina. Amin'ny maha karazan-java-haingo rindrina vaovao azy, miaraka amin'ny asany tsy manam-paharoa amin'ny rano, mitovy loko amin'ny vokatra hazo, fametrahana tsotra sy fikojakojana azy, eken'ny tsena moramora ho solon'ny vokatra hazo izy io. Ny tontolon'ny rindrinay dia vita amin'ny fitambarana hazo voajanahary sy plastika namboarina, izay manambatra ny endrika nentin-drazana ny hazo miaraka amin'ny faharetan'ireo akora mitambatra vita amin'ny injeniera, ary sariaka amin'ny tontolo iainana sy azo averina madiodio. Io koa dia fironana malaza eran'izao tontolo izao.
Ny takelaka rindrina ivelany dia misy takelaka simenitra fibre, takelaka plastika vita amin'ny plastika, takelaka PVC ary fitaovana ara-bato.
1. Haingo tsara
Ny tabilao vita amin'ny simenitra, ny hazo ary ny vato dia loko voajanahary, izay voajanahary sy tsotra. Ny takelaka WPC sy ny takelaka metaly dia namboarina miaraka amin'ny lamina toy ny voam-bary, ary ny lokon'ny tabilao mihantona dia manankarena.
2. Fampiharana marobe:
Izy ireo dia mahatohitra hatsiaka mafy sy hafanana, maharitra, manohitra ny ultraviolet ary manohitra ny fahanterana. Izy io dia misy fanoherana tsara ny harafesina amin'ny faritra asidra, alkaly, sira ary mando. Tsy misy loto, azo averina; fahombiazan'ny tontolo iainana tsara. Mora ny manadio sy manafoana ny fikojakojana aorian'ny fikojakojana.
3. Fampisehoana afo:
Ny vato dia manana fahombiazan'ny afo avo indrindra, ny takelaka simenitra vita amin'ny fibre dia kilasy A1, arahin'ny rindrina mihantona rindrina ivelany PVC; ny index oxygen dia 40, retardant flame ary famonoana tena amin'ny afo; mahafeno ny fenitra fiarovana ny afo nasionaly B1 (GB-T8627-99) izany, raha metaly kosa ny sisin'ny rindrina ivelany dia kilasy B2, ary ny rindrina ivelany rindrina dia mila hosodoko amin'ny loko tsy mahazaka afo mba hahafeno ny fepetra fiarovana amin'ny afo.
4. Mitsitsy angovo mahery:
Ny lafiny anatiny amin'ny tabilao mihantona amin'ny rindrina ivelany WPC dia mety ho tena mety amin'ny fametrahana plastika polystyrene sy ireo fitaovana fanamafisam-peo hafa, mba ho tsara kokoa ny vokan'ny insulated thermal wall. Ny fitaovana fanamafisam-peo dia toy ny fametrahana sosona "landihazo" ao an-trano, fa ny tabilao WPC kosa dia ny "palitao". Ny sidina rindrina ivelany metaly dia fitambarana fitambaran'ny polyurethane fitaovana insulation thermal sy takelaka vy. Ny vokatry ny insulation termal dia tsy azo ampitahaina vetivety, miankina amin'ny hatevin'ny fitaovana insulation thermal. Na izany aza, miaraka amin'ny hateviny mitovy, polyurethane dia avo roa heny noho ny benzene board.
5. Tsy miaro amin'ny ampahany:
Ny takelaka rindrina ivelany WPC dia mifamatotra amin'ny fanidiana sy ny fanantonana, izay afaka mitana ny toeran'ny famonoana rano. Ireo takelaka mihantona vy dia mitovy.
6. Mora apetraka ary vidiny ambany:
Fanamboarana maina daholo; mora apetraka ary mafy orina ary azo itokisana. Ny tetikasa haingon-trano miaraka amin'ny tabilao mihantona amin'ny rindrina ivelany no tetik'asa firavaka haingo indrindra. Raha misy ampahany simba dia tsy mila soloinao fotsiny ilay takelaka manantona vaovao amin'ity faritra ity, izay tsotra, haingana ary mora hitazomana.
7. Serivisy lava:
Ny vato dia manana androm-piainana lava indrindra, ny takelaka simenitra vita amin'ny fibre dia mihoatra ny 50 taona, ny hazo fanoherana ny harafesina dia mihoatra ny 30 taona, ny tabilaon'ny rindrina ivelany WPC dia manana fiainana serivisy farafahakeliny 25 taona, ary ny atiny dia fiaraha-mientana roa sosona miaraka amin'i Geloy nanampy. Ny fiainana serivisy vokatra dia 30 taona mahery. Raha ampiasaina amin'ny sisiny ny loko fluorocarbon dia mety haharitra 15 taona mahery izy io.
Tsy misy miady na mitsipitsipika
Toeram-pandehanana tsy mahazaka slip
Warranty 15 taona
95% hazo sy plastika fanodinana
Manodidina ny 20-25 andro ho an'ny kaontenera 20'ft iray
30% napetraka, ny ambiny dia tokony aloa alohan'ny fanaterana
100% azo averina madiodio
Fonosana palety na be dia be
Misy ny Surface azo
Wpc Famokarana tontonana amin'ny rindrina
A. hazo plastika PE izao no karazan-kazo plastika be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, izany hoe, ny WPC CLADDING anay, WPC FENCING. Voalohany indrindra, andao hofantarina ireo akora vita amin'ny vokatra vita amin'ny plastika PE. Ny akora fototra dia ny plastika PE sy ny vovoka hazo poplar. , Toner, mpitroka anti-ultraviolet, kompatibilizer.
1. PE plastika: ny fampitahana feno ny vidiny sy ny fusion HDPE no safidy tsara indrindra, ary ny hazo plastika eny an-tsena amin'ny ankapobeny dia mampiasa akora voaverina ho toy ny akora fototra, izay mampihena ny fandotoana fotsy ary mahatonga ny tontolo iainantsika ho salama kokoa sy ho tia tontolo iainana. "Recycled" dia antsoina koa hoe fitaovana plastika voaverina. Ny plastika azo haverina amin'ny indostrialy rehetra izay azo ampiasaina indray amin'ny alàlan'ny fizotrany fanodinana sasany dia antsoina hoe plastika voaodina; ireo fitaovana fanodinam-batana dia mizara ho kilasy marobe, toy ny fitaovana fanodinana kilasy manokana sy fitaovana fanarenana kilasy voalohany. , Fanodinana faharoa, fanodinana ambaratonga fahatelo na fanariam-pako aza, mora ny mahatakatra ny dikany ara-bakiteny, ny ambony ny naoty, ny kely ny loto maloto ao anaty plastika, ny fako dia avo lenta amin'ny atin'ny fahalotoana, ary ny safidin'ny akora mivantana. misy fiantraikany amin'ny safidin'ny hazo plastika Satria ny akora vita amin'ny plastika dia fanjakana izay fonosina plastika amin'ny plastika, raha avo ny loto ao anaty plastika, ary kely ny ampahany amin'ny plastika, dia tsy afaka mamonosina vovoka hazo tsara .
2. lafarinina hazo: Mba hahatratrarana ny fangaro lafarinina vita amin'ny hazo sy plastika amin'ny hazo plastika dia tsy misy ihany ny fepetra hentitra amin'ny plastika, fa koa ny lafarinina kitay: ny lafarinina hazo mitovy lanja aminy dia lehibe kokoa ny velarany. ny vovoka. Ny avo kokoa ny tahan'ny plastika ilaina; ny mifanohitra amin'izany, ny lehibe kokoa amin'ny vovoka vovoka hazo, ny kely kokoa amin'ny velaran'ny vovo-tany, ary ny ambany kokoa ny ampahan'ny plastika ilaina mandritra ny fusion plastika. Taorian'ny andrana nandritra ny taona maro, ny vovon-kazo poplar no vovoka vovoka hazo tsara indrindra, ary ny haben'ny vovo-dronono no tsara indrindra amin'ny hatevin'ny 80-100 harato; tsara loatra ny vovo-tany, avo ny vidin'ny fanodinana, mitaky zavatra bebe kokoa ny firafitry ny plastika ary avo kokoa ny vidiny, saingy ny vokatra vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo plastika dia be loatra ny plastika; raha masiaka loatra ny vovo-tany, ambany ny vidin'ny fikarakarana, ary kely ny takiana plastika, saingy ny vokatra vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo vita amin'ny plastika dia tsy ampy fampifangaroana, mora vaky ary mora vaky.
3. Fitaovana mpanampy: Ny tena tanjon'ny toner dia ny mampifanaraka ny lokon'ny akora vita amin'ny plastika. Amin'izao fotoana izao, ny tena fampiharana ny hazo plastika PE dia vovoka miloko tsy mitongilana. Izy io dia manana fampisehoana anti-fading tsara kokoa ho an'ny fampiasana ivelany, izay tsy mitovy amin'ny loko organika ampiasaina amin'ny hazo ekolojika anaty trano. Vovoka, loko toner organika dia mazava kokoa ary mamiratra. Ny lahasa lehibe indrindra amin'ny mpitroka anti-ultraviolet dia ny manatsara ny fahaizan'ny anti-ultraviolet amin'ny fampiasana hazo plastika eny ivelany, ary manatsara ny zava-bita fanoherana ny fahanterana. Compatibilizer dia additive izay mampiroborobo ny fifanarahana eo amin'ny lafarinina sy ny resina.
B. Fantaro vetivety ny akora vita amin'ny plastika, ny dingana manaraka dia ny pelletize. Arakaraka ireo akora etsy ambony ireo, afangaro araka ny refy iray, alao ny plastika hazo plastika amin'ny alàlan'ny fanamainana fusion avo lenta, ary fonosina ampiasaina. Ny asa lehibe ampiasain'ny fitaovana pelletizing dia ny mahatsapa ny fizotran'ny plastika vita amin'ny vovoka sy plastika vita amin'ny hazo, mahatsapa ny fampifangaroana akora biomassa vovoka sy ny plastika PE eo ambanin'ny toetr'andro, ary mitarika pretreatment amin'ny famokarana akora vita amin'ny plastika. Noho ny fihenan'ny fihenan'ny ala-plastika, ny famolavolana pelletizer vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo sy ny pelletizer plastika dia tsy mitovy. Ho an'ny plastika samihafa, hafa ihany koa ny famolavolan'ny pelletizer. Ny pelletizer izay matetika ampiasaina amin'ny polyethylene dia matetika mampiasa extruder kambana kambana, satria ny polyethylene dia resina marefo amin'ny hafanana, ary ny extruder kambana kambana dia manana hery fanetezana mahery ary ny halavan'ny volo dia mitovy ihany. Ny extruder kambana kambana dia fohy, izay mampihena ny fotoana ipetrahan'ny fitaovana ao anaty barika. Ny savaivony ivelany an'ny visy dia misy famolavolana conical hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, noho izany ny haben'ny famatrarana dia somary lehibe, ary ny fitaovana azo plastika amin'ny fomba feno sy mitovy amin'ny barika.
C. Aorian'ny pelletizing dia miditra amin'ny dingana extrusion izy io. Fiomanana maromaro no mila atao alohan'ny fandroahana entana:
1. Hamarino tsara fa tsy misy loto na sombiny misy loko hafa tavela ao anaty hopper mba hisorohana ny loko maloto amin'ny hazo plastika novokarina;
2. Hamarino raha tsy voasakana ny fitaovan'ny fantsom-panafody ary alao antoka fa ny latsa-paka dia tsy latsaky ny -0.08mpa. Tokony hodiovina indroa isaky ny miova ny barika banga raha ara-dalàna izany. Aza mampiasa fitaovana metaly hanadio ny lavadavaka, ary mampiasa plastika na hazo hazo hanadiovana ny loto ao anaty lavaka famoahana barika;
3. Hamarino raha misy sivana metaly ny hopper. Ny sombin-kazo dia voasivana amin'ny alàlan'ny vy mba hanesorana ireo loto maloto mifangaro ao anaty sombintsombiny, hampihena ny filan'ny loto amin'ny vy ao anaty ny fitaovana ary hiantohana ny fampifangaroana tanteraka ireo mombamomba ny hazo plastika.
4. Na miasa ara-dalàna ny rafitra rano mangatsiaka. Ny rafitra rano mangatsiaka tonga lafatra dia ny fitaovana ilaina amin'ny fampangatsiahana aorian'ny fitrandrahana hazo plastika. Ny fitsaboana mangatsiaka ara-potoana dia afaka miantoka ny endrika tsara amin'ny mombamomba ny hazo plastika.
5. Mametraha bobongolo vita amin'ny plastika, ary apetaho ireo bobongolo voatondro arakaraka ireo profil ho vokarina.
6. Hamarino raha toa ka afaka miasa ara-dalàna ny milina fanapahana pneumatic sy ireo singa visy hafa.
D. Ny mari-pana amin'ilay profil hazo plastika vao nesorina dia somary avo, ary mila apetraka an-tanana amin'ny tany fisaka. Aorian'ny fampangatsiahana tanteraka ny mombamomba azy dia hamboarina sy fonosina. Na dia tsotra aza ity dingana ity dia tena zava-dehibe izany. Raha tsy miraharaha ireo pitsopitsony ireo ny orinasa dia matetika no misy kilema ny fitaovan'ny orinasa. Ny hazo plastika tsy mitovy dia hitarika mora foana amin'ny hatevin'ny fahasamihafana amin'ny faritra ambony sy ambany amin'ny vokatra aorian'ny fikosehana sy fanodinana taty aoriana. Ho fanampin'izany, ny piraofilina tsy mitovy dia hitondra fahasahiranana sasantsasany amin'ny fananganana ary hisy fiantraikany amin'ny vokarin'ny tany.
E. Araka ny filan'ny mpanjifa, alaharo ireo profil hazo plastika:
1. Ny fikolokoloana dia ny fanesorana ny sosona hoditra plastika vokarina rehefa esorina ny mombamomba ny hazo plastika, amin'izay ny mombamomba ny hazo plastika dia manana fanoherana tsara kokoa rehefa apetraka amin'ny orinasa.
2. Fitsaboana amin'ny embossing: aorian'ny famolahana ny votoatin'ny profil, ny hazo plastika dia namboarina mba hahatonga ny velaran'ny profil hazo-plastika hisy vokany toy ny hazo.
3. Fanapahana, fanodinana tenona, habe namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, ary vokatra namboarina toy ny filan'ny tenona.
4. Rehefa vita ny fanodinana etsy ambony, ny dingana farany dia ny famonosana ny vokatra. Ny fonosana mety amin'ny vokatra dia mety hampihena ny fahasimbana ateraky ny vokatra mandritra ny fanaterana.
Tranga injeniera 2
Teo aloha: Tsy misy loko mandoko ivelany Panel Co-Extrusion 169.26mm
Manaraka: Co Composite Extrusion Wall Cladding
Voalohany: apetraho aloha ny keel, ny Keel dia mety ho hazo na Wpc
Faharoa: amboary ny tontonana amin'ny rindrina ivelany amin'ny vala amin'ny alim-by
Fahatelo: amboary ny buckle vy sy ny keel amin'ny basy fantsika amin'ny rivotra na visy
Fahefatra: aorian'ny fampidirana ny tontolon'ny rindrina wpc ivelany manaraka ao anaty hidin'ny tontonana ambony, ampiasao basy na fantsom-panafody mba hanombatombanana ny vy sy vy
Fahadimy: avereno ny dingana fahefatra
Fahenina: rehefa vita ny fametrahana ny tontonana rindrina dia ampio manodidina ny L band
hakitroky 1.33g / m3 (Standard: ASTM D792-13 Fomba B)
Faharetana amin'ny sintona 24.5 MPa (Standard: ASTM D638-14)
Hery matanjaka 34.5Mp (Standard: ASTM D790-10)
Modulus Flexural 3565Mp (fenitra: ASTM D790-10)
Hery hery 84J / m (fenitra: ASTM D4812-11)
Hamafin'ny morontsiraka D71 (fenitra: ASTM D2240-05)
Fanitarana hafanana 33.25 × 10-6 (Standard: ASTM D696 - 08)
Tsy misy loko mandoko ivelany rindrina co-Extrusion rindrina 1 ...
Fampitaovana ivelany Wpc Wall Cladding 218.27mm
Fencing amin'ny hazo WPC tsy tantera-drano sy maharitra
China Wpc Wallpanel kalitao tsara indrindra